NASDAQ Chief: Crypto no tsara dingana manaraka eo amin'ny toerana ny vola
Nasdaq lehiben'ny mpanatanteraka Adena Friedman niresaka momba cryptocurrency amin'ny fizaràna ny CNN farany Boss Files podcast ity, Friedman nilaza fa cryptocurrency mahatsapa toy ny "marina dingana manaraka eo amin'ny toerana ny vola", satria ny "fanatontoloana rafitra fandoavam-bola" dia voajanahary miendrika ho ao amin'ny miampita sisintany nomerika toe-karena.
Hoy izy: "Ahoana izany evolves Ary iza moa ao ny cryptocurrencies mety na mety tsy ho ilay iray izay farany mahazo nandray, Mino aho fa tena ny mpitsara mbola avy amin'io. Fa ataoko mieritreritra ny hevitra kokoa fanatontoloana rafitra fandoavam-bola, izay mahomby kokoa noho izay ananantsika amin'izao fotoana izao dia mamela ny vola mba hifindra manerana ny firenena, ary azo antoka fa manohana ny Internet toe-karena. "
Stock varotra App Robinhood manangana fanampiny $ 363M mba hanitarana ny crypto varotra tolotra
US miorina tahiry varotra finday fampiharana Robinhood dia nanambara ny $363 tapitrisa andian-dahatsoratra D famatsiam-bola manodidina milaza fa hamela ny mafy mba hanitarana ny fanompoana cryptocurrency varotra manerana ny firenena amin'ny alalan'ny faran'ny 2018.
Araka ny fanambaràna iray navoaka tao amin'ny Alakamisy, ny famatsiam-bola manodidina manome lanja ny mafy amin'ny $5.6 lavitrisa.
De labiera soa aman-tsara mamantatra diamondra avy Ahy ny mpanefy firavaka mampiasa blockchain
De labiera Group nanambara androany fa efa soa aman-tsara fantarina 100 diamondra manamorona ny rojo sarobidy nandritra ny mpanamory ny orinasa blockchain ny sehatra, nanamarika vao voalohany no nisy diamondra ny lalana efa nomerika fantarina avy amin'ny Ahy ny antsinjarany.
An loha tsy mety miova ary azo antoka nomerika lalana noforonina ho fantina saro diamondra De vanja milevina ny labiera, rehefa nifindra avy amin'ny Ahy ny cutter sy polisher, dia amin'ny alalan'ny ny mpanefy firavaka. ny sehatra, antsoina hoe Tracr, Antenaina mba ampahibemaso hanomboka aoriana amin'ity taona ity.
Crypto mpampiasa vola Mike Novogratz: Crypto ny firenena ny revolisiona
“Izany no ny vahoaka ny revolisiona,” Michael Novogratz ny Galaxy Digital nilaza tamin'ny vahoaka tao amin'ny Fluidity Summit tany Brooklyn tamin'ny Alakamisy.
Hoy izy “Décentralisées revolisiona fa hanan ny fiantraikany lehibe indrindra eo amin'ny antsinjarany heviny, fa ny ahatongavana any dia handray ny fampiasam-bola lehibe herin 'ny andrim-panjakana. Ny rafitra omby eo amin'ny hetsika,” nampiany “Bullish kokoa aho tamin'ity taona ity noho ny tamin'ny taon-dasa aho.”
Tetikasa nitranga fahiny ny fiainana manokana “Dandelion” novokarin'ny Bitcoin devs
Developers manantena ny hitondra avo kokoa haavon'ny anarana raharaham-barotra ho an'ny Bitcoin blockchain nitranga fahiny no nanorina ny “Dandelion” tetikasa fiainana manokana.
Miresaka ny olana nitranga fahiny fa ny tolo-kevitra voalohany Dandelion dia mety ho hita any amin'ny deanonymization fanafihana.
Ny mpandraharaha dia nanambara voalohany hardcore ny blockchain Dogecoin
Araka ny fanjakana ...
Next Post:Varotra bots for Cryptotrading